RASMI: Barcelona Oo Ku Dhawaaqday In Arda Turan Uu Amaah Ku Aaday Kooxda Basaksehir FK Ee Dalkiisa & Blaugrana Oo Shuruud Daba Dhigtay.
Tuesday April, 24 2018 - 17:08:47
Saturday January 13, 2018 - 19:37:41 in by salman abdi
Kooxda kubada cagta Barcelona ayaa ku dhawaaqday iney amaah ku bixisay xidiga reer Turkey Arda Turan kaas oo ku joogi doona Basaksehir FK inta ka dhiman qandaraaskiisa Camp Nou, balse shuruud adag ayey daba dhigtay oo ay faa’iido ku heli karto waqti kale.
Arda Turan waxaa kaga haray qandaraaskiisa kooxda laba sanadood iyo bar, balse mudada uu joogoBasaksehir FK, waxey Barcelona awood u leedahay iney ka iibiso koox walba oo soo dalbata, waana halka shuruud ee la daba dhigay heshiiska.
Arda Turan wuxuu kooxdaan u saftay kaliya 55-kulan isagoo u dhaliyay 15-gool muddo laba sano iyo bar ah – waqtigaas wuxuu hantay lix koob oo ay ku jiraan – 1 La Liga, 2 Copa del Rey,1 Spanish Super Cup, 1 Club World Cup and 1 European Super Cup.
Arda wuxuu kooxda kusoo biiray xagaagii 2015, balse nasiib xumo uma ciyaari tan iyo January 2016 madama Atletico Madrid uu ganaax ka saarnaa suuqa isla markaana aan ciyaartoy laga iibsan karin.
"Barcelona waxey ku dhawaaqeysaa heshiis amaahda oo ay xidiga reer Turkey Arda Turan ugu dirtayIstanbul Basaksehir” ayaa lagu soo qoray barta twitter-ka ee kooxda.
Hargeysa: Daawo Xukuumadda Somaliland oo ka hadashay Dhirbaaxo ay Ciidamada Qaranku kaga jawaabeen weerar Ciidamada Puntland kusoo qaaday Ciidamada Qaranka ee Jiidda Hore
19/04/2018 - 13:19:05